Accueil > Gazetin'ny nosy > FFKM: “Ny vaovaon’ny antoko no mibahana amin’ny TVM haino amanjerim-panjakana”
FFKM: “Ny vaovaon’ny antoko no mibahana amin’ny TVM haino amanjerim-panjakana”
Tany Antsirabe Vakinankaratra no nanaovana ny fivorian’ny Komity Foibe faha-40-n’ny FFKM ny faha-23 ka hatramin’ny faha-26 novambra.
Nifantoka manontolo amin’ny toe-draharaham-piaraha-monina malagasy amin’izao fotoana ny vontoatin’ny fehin-kevitra navoakan’io Komity foibe io.
Natomboka ny FFKM tamin’ny toerana misy ny fiangonana eo anivon’ny firenena sy ny zava-mihatra amin’ny fiangonana ny resaka. Notsongain’ny Ffkm tamin’izany ny mbola fitohizan’ny famakiana sy fandrobana ary fangalarana ny Fanaka Masina ao amin’ny trano Fiangonana; ny Famonoana mpitondra fivavahana; ny Fandoroana Baiboly izay fototra ny finoana kristianina.
Ho an’ny Ffkm dia midika ho fiantsiana sy famakiana ady amin’ny mpanara-dia an’i Kristy izany.
Momba ny fiainam-pirenena ankapobeny dia notsiahivin’ny Ffkm fa “Heritaona lasa izay dia voalaza tao amin’ny fanambarana tamin’ny Komity Foibe faha-39 natao tany Toamasina fa ny tsy fanatanterahana ireo fehin-kevitra tapaka nandritra ny fampihavanam-pirenena mifototra amin’ny 4F (Fiaiken-keloka, Fibebahana, Fahamarinana, Fihavanana) natao tamin’ny 28- 30 aprily sy ny 1-2 may 2015, no miteraka ny tsy fandriam-pahalemana, ny fahalovana, ny fihanaka ny zava-mahadomelina, ny tsy fanarahana rafitra, ny tsy fahalavorarian’ny tontolon’ny fitsarana, araka ny voalaza hoe : « Mihemotra ny rariny ary mijanon-davitra ny hitsiny, satria eny ankianja malalaka no voatohintohina ny fahamarinana ary tsy mahazo miditra ny hitsim-po » (I Isaia 59: !4) ka niteraka ny fitsaram-bahoaka, sy « ny fahavoazan’izay mijoro amin’ny fahamarinana » (lsaia 59:15).
Mbola mitombina ary mihamitombo aza ireo toe-javatra voatanisa ireo hatramin’izao.
Tsy nohadinoin’ny Ffkm ny niresaka manokana ny tontolon’ny tsy fandriam-pahalemana ka nanipihan’ny fehin-kevitra fa noho ny kolikoly, dia tsy hita intsony ny fihafaran’ny raharaham-pitsarana momba ny fanondranana tsy marina ny harem-pirenena, rakotry ny kolikoly ny fiainam-pirenena manontolo.
“Mihamafy hatrany ny tsy fandriam-pahalemana ary mihatra hatrany ambany akalana ny fahantrana; mihamafy ny fiatrehana ny asan-dahalo izay mampiasa fitaovam-piadiana avolenta mihoatra noho ny an’ny mpitandro filaminana; mihena ny vokatra amin’ny lafiny rehetra noho ny tsy fandriam-pahalemana sy ny haintany ary midangana izay tsy izy ny vidim-piainana..”, hoy ny Ffkm.
Fa isan’ny teboka iray navoitran’ny Komity Foibe Ffkm koa ny fitantanana ny tontolon’ny filazam-baovao ka nahitsy ny fehin-kevitry ny Ffkm nanao hoe “ny vaovaon’ny antoko no mibahana amin’ny haino aman-jerim-panjakana ka tsy mahazo afa-tsy vaovao tokana ny olona”. Notsiahivin’ny Ffkm mihitsy moa ny tenin’ny Soratra Masina araka ny “Isaia 59:13b” hoe: « Famoretana sy fikomiana no resakay ary lainga fotsiny no foroninay ao ampo sy avoakan’ny teny ataonay ».
Tsy nohalaivanin’ny Komity Foiben’ny Ffkm koa ny lafiny fitantanana ara-toekarena ka nanitrikitrihanio fivorian’ny Komity Foibe io fa “Lasa tantely afa-drakotra ny Firenena ary manjary tompony mangataka atiny ny Malagasy”. Navoitran’ny Ffkm koa ny hoe “Tsy mangarahara ny fifanarahana ara-barotra iarahana amin’ny vahiny izay mamatotra ny Firenena ka lasa manandevo ny taranaka faramandimby ny trosa (angovo, harena ankibon’ny tany, volamena, vato soa…)”. Navoitran’ny Komity Foibe Ffkm koa ny fanomezan’ny fanjakana vahana ny vahiny amin’ny fandraharahana ka lasa ny vahiny indray no mahazo fanampiana. Tsy niahotrahotra koa ny Ffkm nilaza fa “Tsy mangarahara ny fampiasana ny volam-panjakana ka mifangaro amin’ny asan’ny antoko”.
Eo anatrehan’ireo zava-misy ireo dia, miangavy no sady mangataka aminareo mpitondra Fanjakana ny FFKM, hoy ny fehin-kevitra, mba hihaino amim-panetren-tena ny feon’ny Fiangonana na dia maharary aza izany ka hamaha ny olana, hanome vahaolana ary hanome maridrefy amin’ny fanatanterahana azy. Efa fetrorona ny fahantrana, ary mba tsy ho ny vahiny no mahazo vahana eto amin’ny tanin’ny Malagasy dia manolotra ireto vahaolanà sy soritr’asa voafehy anatin’ny fehin-kevitra telo ireto ny F.KM:
Ao anatin’ny vahaolana natolotra ny Ffkm ny tokony hanomezan-danja ny mpanabe sy ny teknisianina Malagasy; ny tokony hampirisihana hatrany ny mpitandro filaminana hanohy ny fanadiovana anatiny sy ny fanitsiana ireo diso lalana; ny tokony hampahatsiahivana ny mpitondra fanjakana mba tsy hanao dika mitovy fotsiny ny lalàna misy any ivelany; ny tokony hiompanana amin’ny fanarenana sy fanorenana hatrany ifotony ny rafitra rehetra eto amin’ny Nosy (Refondation).
Amin’ny famaranana ny fehin-keviny no anipihan’ny ffkm fa “Efa maro ny fanairana natao hatramin’ny Komity Foibe faha 38 sy faha 39, kanefa toa mitory teny any an-tany efitra ny FFKM, ka mila fiovam-penitra mahery vaika ny fitondrana ny firenena.”